Haweeney u dhalatay Koonfur Afrika ayaa dhashay toban cunug oo mataano ah! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Haweeney u dhalatay Koonfur Afrika ayaa dhashay toban cunug oo mataano ah!
Haweeney u dhalatay Koonfur Afrika ayaa dhashay toban cunug oo mataano ah!
Haweeneydaan oo u dhalatay Koonfur Afrika ayaa dhashay toban cunug oo mataano ah
South Africa (Halqaran.com) – Haweeney u dhalatay waddanka Koonfur Afrika ayaa la sheegay in ay hal mar dhashay toban carruur ah, taas oo noqon doonta markii ugu horreysay ay haweeney hal mar wada dhasho toban carruur ah haddii dhakhaatiirtu xaqiijiyaan.
Gosiame Thamara Sithole oo 37 jir ah horeyna u heysatay mataano ayaa la sheegay in ay dhashay toban carruur ah iyadoo toddoba ka mid ah ay yihiin wiilal halka saddexna ay yihiin gabdho.
Aabaha ay u dhasheen carruurtaan oo lagu magacaabo Tebogo Tsotetsi oo hadda shaqo la’aan ah ayaa u sheegay saxafiyiinta in carruurtaan ay dhasheen habeenimadii Isniinta isagoona sheegay in uu ku faraxsan yahay dhalashada carruurtiisa.
Waxay imaaneysaa bil un kadib markii haweeney u dhalatay waddanka Mali ay hal mar sagaal carruur ah ku dhashay isbitaal ku yaalla Morocco.
Haweeney u dhalatay Koonfur Afrika oo dhashay toban cunug oo mataano ah